विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल, पाँच महीनामा साढे ६ प्रतिशत मात्रै खर्च
विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ। यो पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो।
साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
नेपाल ब्यांक लिमिटेडले साउथ वेस्टर्न कलेजमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
एमसीसी बोर्ड बैठकमा नेपालबारे समीक्षा, अमेरिकाले अझै कुर्ने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बोर्ड बैठकले नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा छलफल गरेको छ।
वर्ल्डलिंकले भित्र्यायो ६०० एमबीपीएसको इन्टरनेट इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले ६०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट भित्र्याएको छ। यसमा नोकिया बेकन ३.० राउटर प्रयोग हुनेछ।
अर्थतन्त्रमा गहिरिंदै सङ्कट, एकै महीनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. ७४ अर्बले घट्यो नेपाल राष्ट्र ब्यांकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कात्तिक महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका कैयौं सूचक नकारात्मक रहेको देखाएको छ।
४.२३ अङ्कले घट्यो नेप्से, ४ अर्ब ५८ करोडको कारोबार बुधबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ४.२३ अङ्क (०.१७ प्रतिशत)ले घटेको छ।
भीभोको सेल्स कार्निभल नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न थालेकाे चौथो वर्षको उपलक्ष्यमा भीभोले सेल्स कार्निभलको आयोजना गरेको छ।
नबिल फेलोसिपका लागि आह्वान नबिल ब्यांकले ‘नबिल फेलोसिप कार्यक्रम’ को आवेदन खुला गरेको छ।
मंगलम् इन्डस्ट्रिजको प्लम्बर्स मिट मंगलम् इन्डस्ट्रिजले देशको विभिन्न ठाउँँमा प्लम्बर टेक्निसियनस् भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
‘होण्डाको साथ ७’ योजनाका विजेता घोषणा
नेपालका लागि होण्डा मोटरसाइकल तथा स्कूटरको आधिकारिक विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले दशैं तथा तिहार स्किम ‘होण्डाको साथ ७’ का विजेता घोषणा गरेको छ।
लहानमा रेनोको शोरुम
नेपालका लागि रेनल्ट गाडीको आधिकारिक वितरक एड्भान्स अटोमोबाइल्सले सिरहाको लहानमा नयाँ शोरुम स्थापना गरेको छ।
शेयर बजार ६ प्रतिशत बढ्यो, सर्किट लागेर कारोबार बन्द
मंगलबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से)ले ६.०१ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ।
पुष्पकमल दाहालको ‘अनर्थशास्त्र’ जब उदार समाज र आर्थिक प्रणालीप्रति राजनीतिक नेतृत्वले अविश्वास गर्छन्, नागरिकले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न छोड्छन् ।
टोयटा राइज सार्वजनिक नेपालका लागि टोयटा गाडीको आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिले एसयूभी मोडलको राइज सार्वजनिक गरेको छ।
पूँजी बजारबारे माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक : विवेकशील साझा विवेकशील साझा पार्टीले पूँजी बजारबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार गरेको टिप्पणीको आलोचना गरेको छ।
खल्तीमा वर्ल्डलिंकको ४० प्रतिशत लगानी इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले खल्ती डिजिटल वालेटमा लगानी गरेको छ।
ग्रेभिस फुडसँग ज्योति ग्रुपको सहकार्य ज्योति ग्रुपले ‘बास्किन रोबिन्स’ लाई प्रबर्द्धन गर्न ग्रेभिस फुड प्रालिसँग सहकार्य गरेको छ।
भारतमा विद्युत् बिक्री बढाउन ऊर्जा कूटनीति आवश्यक: ऊर्जामन्त्री भुसाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत् निर्यातको भरपर्दो आधार दिए विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले अनुमति दिने बताएकी छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा आधा दर्जन व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा व्यापारबाट मनग्य धन कमाएका व्यवसायीहरू राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालेर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न आरक्षणको टेको समाइरहेका छन्।
बलम्बुमा सानिमा ब्यांकको शाखा सानिमा ब्यांक लिमिटेडले काठमाडौंको बलम्बुमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ।
चन्द्र टण्डनको नेतृत्वमा नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघको नयाँ कार्यसमिति नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघको १६औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।
शेयर बजार लगानीकर्ताले चार महीनामै गुमाए ११ खर्ब शेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति चार महीना नपुग्दै रु. ११ खर्ब ४९ अर्बले घटेको छ।